Isicwangciso esiphumeleleyo sokuwina xa uqikelela amanani
Isicwangciso esiphumeleleyo sokuwina xa uqikelela amanani04
UThomas M. Cover wabuza lo mbuzo ulandelayo omangalisayo ngo-1987 ku "Vula Iingxaki Kwezonxibelelwano Nokubala": Umdlali \_(X\_) ubhala amanani amabini ahlukeneyo kunye nalawo akhethwe ngokungakhethiyo \_(A\_) kunye \_(B\_) kwimibini emibini eyahlukeneyo Ingcezu yephepha wayibeka phantsi etafileni. Umdlali \_(Y\_) ngoku ukhetha ngokungacwangciswanga elinye lala maqhekeza ephepheni, alibone inani kwaye ngoku kufuneka athathe isigqibo sokuba ingaba eli nani lincinci okanye likhulu kunelinye inani elifihliweyo etafileni.
Umdlali \_(Y\_) akanokujika ikhadi elijonge ezantsi. Kuqala ukuvumela ukuba uthathe isigqibo sengqekembe kwaye unesicwangciso esiphumeleleyo sepesenti \_(50\_%\_) ifunyenwe. Ngaba sikhona esinye isicwangciso esinokubakho okuphezulu?
Phambi kokuba umdlali \_(Y\_) akhethe ngokungakhethiyo kula maphepha mabini, umisela inani lendalo elingenakuphikiswa \_(C\_) . Emva koko ujika elinye kula maphepha mabini ngokungacwangciswanga. Ngoku uthatha isigqibo ngolu hlobo lulandelayo: Ukuba inombolo eguqulweyo \_( \_leq C \_) , ukhetha inani elikwelinye uluhlu njengelona likhulu; ukuba inani eliguqulweyo ngu \_( > C\_) , ukhetha inani elisandula ukuguqulwa njengowona mkhulu. Ngelishwa, ithuba lokuphumelela ngoku \_( > 50\_% \_) .
Siqala ukuseta ukutyunjwa kwamanani amabini ku \_(A < B\_) . Ke ngoku elinye lamatyala amathathu alandelayo lenzeka kwangoko emva kokukhethwa kwe \_(C\_):
Ityala lokuqala: \_( C \_leq A < B \_) : Ke amathuba okuphumelela ngu \_(50\_%\_) , kuba akukho lwazi malunga \_(A\_) kunye \_(B\_) .
Ityala lesi-2: \_( A < B \_leq C \_) : Ke amathuba okuphumelela ngu \_(50\_%\_) , kuba akukho lwazi malunga \_(A\_) kunye \_(B\_) .
Ityala lesithathu: \_( A < C < B \_) : Ke amathuba okuphumelela ngu \_(100\_%\_) , kuba ukuba \_( B \_) ijikwe kuqala, umntu uhlala no \_( B \_) kwaye ukuba \_(A\_) ijikwe kuqala, utshintshela ku \_(B\_) , ke uhlala ukhetha inani elikhulu.
Okumangalisayo kukuba, esi sicwangciso sikwasetyenziswa kubomi bemihla ngemihla: Umzekelo, ukuba kuya kufuneka uthathe isigqibo kwangoko okanye ngokuchasene nokuthenga imveliso ngaphandle kokufumana isithembiso sokuthelekisa, uzibekela umda wemali kwangaphambili. Ukuba lo mda wexabiso lokwenyani ufezekisiwe, kuthengiwe kwenziwa-kungenjalo akunjalo.